Fending Off Recounts, Zimbabwe Opposition Challenges Other Election Results
Though the Zimbabwean opposition formation led by Morgan Tsvangirai has opposed recounts the Zimbabwe Electoral Commission has proposed for 23 constituencies on Saturday, the Movement for Democratic Change has challenged the results in some 60 constituencies won by the ruling party alleging various electoral abuses.
Lawyers for Tsvangirai's MDC grouping filed court papers Tuesday charging that the ruling ZANU-PF party of President Robert Mugabe bought votes, intimidated voters and interfered with election officers in the run up to March 29th elections.
Constituencies in which the results are being challenged include Harare South, Zvimba North in Mashonaland West Province, and Murehwa North and South in Mashonaland East Province.
MDC lawyer Alec Muchadehama told reporter Jonga Kandemiiri of VOA's Studio 7 for Zimbabwe that opposition wants the results in the 60 constituencies set aside so that new elections can be held in the disputed constituencies.
Meanwhile, a high court judge put off until Wednesday a hearing on another request by the opposition formation asking the court to block a recount of all votes cast in 23 constituencies proposed by the Zimbabwe Electoral Commission, Reuters reported.
Judge Antonia Guvava deferred the hearing for 24 hours saying she would rule then if MDC lawyers could submit additional evidence or if the case would be dismissed.